ငါတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဘာလဲ ၊ ဌေးလွင်ဦး | Danya Wadi
»ဆောင်းပါးများ»ငါတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဘာလဲ ၊ ဌေးလွင်ဦး
ငါတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဘာလဲ ၊ ဌေးလွင်ဦး
Posted by danyawadi on February 3, 2013 in ဆောင်းပါးများ
ငါတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဘာလဲ ၊ ဌေးလွင်ဦး
ရိုဟင်ဂျာ အရေးပေါ်လာတော့- ငါတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ပိုပြီးသတိထားမိလာတာ သေချာတယ်၊ ဒီမှာ ငါတို့ ကို နား လည်ပေးသူ လူတစ်စု၊ ပညာရှင် တစ်ချို့ ရှိနိုင်သလို- နားလည်မှု လွဲမှားနေတဲ့ လူသားအများလည်း ရှိနေမှာသေ ချာတယ်။ အထူးသဖြင့် မတော်မတရားသော တစ်ဘက်သတ်ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် ငါတို့က မြန် မာ နိုင်ငံကို အတင်းအဓမ္မ အစ္စလာမ် သာသနာပြုမယ်၊ ကုလားကြီးစိုးရေးတွေကို လုပ်မယ်၊ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်မယ်- ဆိုတာတွေက လူထုကြား မှာ မိုးမွှန် နေ ပါတယ်။– ဒီတော့ ငါတို့အနေနဲ့ မြန်မာလူထုကို ငါတို့ရဲ့ ရည်ရွယ် ချက် ဘာလဲ၊ ငါတို့က ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ အဆက်အသွယ် များ၊ ပညာများ၊ ငွေကြေးများ၊ နည်းပညာများကို စု ဆောင်း ခဲ့ပါသလဲ- ဘာအတွက်လဲ ဆိုတာ လူထုအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်း လင်း သိဘို့ လိုအပ်ပါမယ်။
(၁) ငါတို့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မတော်မတရား ဖိနှိပ် သုတ်သင်ခံနေရတဲ့ လူမျိုး ဖြစ်တယ်၊ ဒီလို မတရားသဖြင့် ဖိနှိပ်ခံ ရခြင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမယ်။ မြန်မာလူထု အနေနဲ့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်လာအောင် ရုန်းကန်လှုပ် ရှားမယ်။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လူနဲ့ လူ အတူတူ ဖြစ်စေရမယ်၊ ရှမ်း လူမျိုးကို နာမ်နှိမ်ပြီး ပဲပုပ် လို့ ခေါ်တာမျိုး၊ ကရင် လူမျိုးကို နာမ်နှိမ်ပြီး ငပွေးလို့ ခေါ်တာမျိုး၊ မွန်ကို တလိုင်းလို့ ခေါ်တာမျိုး၊ မွတ်စလင်များကို ကုလားလို့ ခေါ် တာမျိုး၊ ချင်းလူမျိုးများကို ချင်းစုတ် လို့ ခေါ်တာမျိုး- စတဲ့ လူ-လူချင်း အနိုင်ကျင့် နာမ်နှိမ်ခေါ်ဆိုတာမျိုးများ ကို ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းများနဲ့ ထိ ထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ကိုင်တွယ်သည်အထိ တော်လှန်ရေး လုပ် သွားမယ်။
(၃) စာသင်ကျောင်းပညာရေးများမှာ ဘာသာတစ်ခုခုကို မျက်နှာသာ ပေးနေတဲ့ မူဝါဒများကို လုံးဝဖျက်သိမ်းပြီး ပညာရေး ကို ပညာရေးပီသအောင် မူဝါဒချမှတ်တဲ့ ပညာရေးစနစ်များ ပေါ်လာသည်ထိ တော်လှန်ရေး လုပ်သွား မယ်။
(၄) ဘာသာတစ်ခုခုကို မတော်မတရား တစ်ဘက်သတ် ၀ါဒဖြန့်ချီနေတဲ့ စာပေမျိုး၊ အပြောအဟောမျိုး လူထုကြား မှာ မှိုင်း တိုက်ပေးမှုမျိုး ပပျောက်သွားသည်ထိ တော်လှန်ရေး လုပ်သွားမယ်။
(၅) ဘာသာတရားတိုင်းကို လူ တစ်ဦးချင်းစီက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့် ရှိစေရမယ်၊ သို့မဟုတ် ဘာ သာတရားကို မကိုးချင်သူများက မကိုးကွယ်ဘဲ နေနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိစေရမယ်၊ လူတစ်ဦးရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဆုံးဖြတ် ချက် အ ပေါ် အခြားလူတစ်ဦးက အနိုင်ကျင့်ခြင်းမျိုးကို ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေး သည် ထိ တော်လှန်ရေး လုပ်သွား မယ်။ မည်သည့် ဘာသာမှမဆို အတင်းအဓမ္မ သာသနာပြုခြင်း- လူနည်းစုတို့အား စိတ် ဓါတ်ရေး ရာ သိမ်ငယ်အောင် ပြု လုပ်ပြီး တစ်ဘက်လှည့်နည်းဖြင့် လူများစု ဘာသာအတွင်းသို့ ကူးပြောင်း သွားအောင် ဖန်တီးခြင်းများကို ရပ်တန့်သွားသည် ထိ တော်လှန်ရေး လုပ်သွားမယ်။
(၆) ရိုဟင်ဂျာကိုသာ မက အခြားသော မည်သည့် တိုင်းရင်းသားကို မဆို မတော်မတရား ဖိနှိပ်ထားလျှင် မတော် မတရား ဖိနှိပ်ခံရသူများ ဘက်မှ ရပ်တည်လျှက် တော်လှန်ရေး လုပ်သွားမယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ပညာ၊ ဓန၊ ကာ ယ အားများ နဲ့ ဆင်းရဲသား ပြည်သူ အားလုံး ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားဘဲ အလုပ်အကြွေးပြုသွားမယ်။
(၇) အမှန်တရားနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖျက်ပြီး အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ လူတွေကို ငါတို့ တော်လှန်ရမယ့် လူတွေ အဖြစ် သတ် မှတ်ပြီး- အမှန်တရားနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို မြတ်နိုးသူတိုင်းနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဘို့ နည်းလမ်း အားလုံးကို ငါတို့ ဘက်က ဖွင့်ထားမယ်။
(၈) နှစ်ပေါင်း ၆၀ နစ်နာခဲ့ရတဲ့ မွတ်စလင်များကိုလည်း လက်စားချေလိုစိတ်များ မထားဘို့၊ အမုန်းဓါတ်ခံများ ကို ပါယ် ဖျက် ဘို့၊ လူသားချင်းကြား ချစ်ခင်ကြာနာမှုတရားထားဘို့- မရှိဆင်းရဲများကို ကူညီဖြည့်ဆီးပေးဘို့၊ မိဘမဲ့ ကလေး များကို လူ လားမြောက်အောင် မွေးမြူစောင့်ရှောက်ပေးဘို့-၊ ငါတို့ဘက်က တတ်အားသမျှ ပညာ ရေး သင်တန်းများ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရေးများကို ဆောင်ရွက်သွားမယ်။
ဒါငါတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြစ်တယ်။ ငါတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးကလည်း ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကို ဒီအတိုင်း ပဲ မေတ္တာ ရပ် ခံနေတယ်၊ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွနေတဲ့ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်များကိုလည်း သည်းခံဘို့၊ အခြေအနေ ကို ဆက် လက်စောင့်ကြည့် ဘို့ အတတ်နိုင်ဆုံး သံတမန်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဘို့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြောင့်ဖြနေတယ်၊ – ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံ သား တိုင်းကို အသိပေးလို တယ်။
မြန်မာပြည် ချစ်ခင်ညီညွတ်ပြီး တိုးတက်သာယာ လာစေဘို့- ငြိမ်းချမ်းရေးကို တစ်ကယ်မြတ်နိုးတဲ့ မည်သည့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး၊ ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာတော်၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနဲ့ မဆို ဆွေး နွေး တိုင်ပင်ဘို့လည်း ငါ တို့ဘက်က နည်းလမ်းအားလုံးကို ဖွင့်ထားပါတယ်။
← “မွတ်စလင်မ်တို့ သတိပြုစေချင်တဲ့ အကြောင်းများ”
မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးနှုန်းများကို“ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ထား တဲ့ ဈေးနှုန်းအထိ လျော့ချဖို့ အစီအစဉ် ရှိ →
4 comments on “ငါတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဘာလဲ ၊ ဌေးလွင်ဦး”
gispanadi 18 February 3, 2013 at 12:09 pm	Reply
အထက်ဖေါ်ပြပါ ဦးတည်ချက်အားလုံးသည် မြန်မာတိုင်းရင်သား နိုင်ငံသားမွတ်စလင်မ်အားလုံး၏ဦးတည်ချက်လည်းဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံသည် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များလည်း ပိုင်သည် မြန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြန်မာရေ မြေ ၏ အကျိုးကိုခံစား စံစားသူအားလုံး ဘာသာ လူမျိုး မရွေး ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှမဖြစ်သည်။ဘာသာတူသူဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျူးကျော်စော်ကားလာသူ ကိုမြန်မာမွတ်စလင်မ်မးအာလုံး မြန်မာရေ မြေ ကို ကာကွယ်ရင် အသေခံ ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။မြန်မာ့မွတ်စလင်မ် အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံပေါ် သစ္စာရှိသူများဖြစ်သည်။
yooetar February 3, 2013 at 1:43 pm	Reply
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတဲ့ ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင်တွေကိုပြောလိုက် ဝက်သားစားပြီးစိတ်ဖြေလိုက်လို့။ အယုတ်တမာကောင်တွေ ကျီးတွေလိုဝိုင်းအာဖို့ ခွေးတွေလိုဝိုင်းကိုက်ဖို့ဘဲတတ်တဲ့ဘာသာဝင်တွေ။ မွတ်ဆလင်ဖြစ်တာနဲ့ မှားမှားမှန်မှန် ကူညီချင်တတ်တဲ့ကောင်တွေ။ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ဆိုတာ မင်းတို့ကောင်တွေကိုပြောတာ။ စောက်ကြီးစောက်ကျယ်ပြောမနေနဲ့ဌေးလွင်အူး မင်းတို့မွတ်ဆလင်တွေ ဘာစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာသိကွ။ ကမ္ဘာ့လူမုန်းအများဆုံးဘာသာရေးရဲ့ အောက်ကကောင်တွေ။ ဟုတ်မဟုတ်????? Quran 9;29:.. “fight those who do not believe until they all surrender ,paying the protective tex in submission”…
yooetar February 3, 2013 at 1:58 pm	Reply
မင်းတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်ကောင်တွေက HIV ပိုးလိုကောင်တွေဘဲ။ ဝင်လာခါစတော့ ဘာမှမဟုတ်သလိုနဲ့ သိတောင်မသိရဘူး။ ပြန့်နှံ့တည်ရှိပြီး အင်အားများ များလာပြီဆိုမှအုံလိုက်ကျင်းလိုက် ထကြွပုန်ကန်သတ်ဖြတ်ကြ ဆန္ဒတွေပြကြနဲ့ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းကြည့်လိုက် မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်လိုဆိုတာ မင်းတို့လည်းသိနိုင်တယ်။ ဟုတ်မဟုတ်??? HIV ပိုးလိုကောင်တွေ… ပြောလိုက်တော့အကြင်နာတရား သတ်လိုက်တဲ့လူနှင့်နွား။ ဝင်လာပုံညင်သာပြီးတော့ အဖျက်ကြမ်းတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေ Hiv ပိုးလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကောင်တွေ။
True Seeker February 3, 2013 at 4:46 pm	Reply
မင်းတော်တော် ဟာသပြောတယ့်သူပဲ မင်းဦးနောက်နဲ့ အသိဥာဏ်ကိုလည်း
အလုပ်လေးဘာလေးပေးပါအုံးကွာ ဘယ်သူကကျီးတွေလိုဝိုင်းအာဖို့ ခွေးတွေလိုဝိုင်းကိုက်ဖို့ဘဲတတ်တဲ့ဘာသာဝင်တွေ လဲဆိုတာကို မင်းတို့ကိုယ်မင်းတို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဖြစ်တာနဲ့ပဲ တစ်နိုင်ငံလုံးကို မင်းအဖေတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ထင်နေတာလား ရပါတယ်မင်းတို့ကအသံကောင်းဟစ်နေကြပဲ ပြောရအုံးမယ်
မြဲမြဲမှတ်ထားကွ ငါတို့မွတ်ဆလင်မ်တွေက ခွေးတွေ ကျီးကန်းတွေ မျောက်တွေ နွားတွေ ပြောရရင် လူမဟုတ်တယ့် အကောင်ဗလောင်တွေ ဘ၀ ကနေလာတာမဟုတ်တော့ မင်းတို့ပြောသလိုနွားသတ်တယ့် သူတွေပေါ့ကွာ
မြန်မာ အာဆမ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းဝေး တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အဖွင့် မ်ိန့်ခွန်းပြော
ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ပို့ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စအတွက် ကျနော့်ရဲ့ အတိုချုပ် တုံ့ပြန်မှု
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု Amnesty အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
Burma-Rohingya Crisis: UK has received ‘very troubling’ evidence that might suggest ‘genocide’ has been committed
ရခိုင်အရေး တရုတ် အဆိုပြုချက် အပေါ် တုံ့ပြန် ချက်များ
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ လူ့အခွင့် အရေး ၃၅ ဖွဲ့တောင်းဆို
ဥရောပ သမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာ အကြီးအကဲ Federica Mogherini ကို သတင်းထောက်များ မေးမြန်း (Video)
ကန်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စစ်တွေ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်စခန်း လေ့လာ
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးနဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်များ စစ်တွေဟိုတယ်မှာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့များနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
UEHRD လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေပြောကြားချက် (အင်တာဗျူး)
ရွှေ့ပြောင်း ခိုးဝင်သူများ အရေးဖြင့် ကမ္ဘာသည် မတည်ငြိမ်မှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
EU နိုင်ငံခြားရေး အကြီးအကဲ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် စခန်း သို့ လေ့လာရန် ရောက်ရှိ/ ပြီးလျင် နေပြည်တော် တွင် ဆွေးနွေးမည် (Video)
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ နိုင်ငံတကာ ၀င်မပါဖို့ တရုတ် တိုက်တွန်း
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ
Zimbabwe’s President Robert Mugabe addresses the nation after army takes control (Video)
US Congressional fact-finding mission visits Cox’s Bazar, witnesses Rohingya plight (Video)
ရိုဟင်ဂျာအရေး နိုင်ငံတကာ မပါသင့်လို့ တရုတ် ပြောကြား
US won’t be constrained by UN Security Council in Syria: Haley
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများ မုဒိမ်းကျင့်ခံရမှု တရုတ်မီဒီယာ ဖော်ပြ – Rohingya women face violence, rape by Myanmar troops
ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှရောက် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Wang Yi နဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေဆုံ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံး သုတ်သင်မှုတွေအတွက် အမေရိကန်ကမြန်မာကို အပြင်းအထန် ဖိအားပေးရ မယ်လို့ Observer သတင်းဌာနဖော်ပြ
ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးများ လိင်စော်ကား ခံရမှုကို အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ ရှုတ်ချ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးထားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကာ/ချုပ် ပြောကြား
အာ​မေရိကန်​ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Tillerson မြန်​မာခရီစဉ်​ အ​ပေါ် သုံးသပ်​ချက်​
မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ် နဲ့သုံးနိုင်​ငံ ခေါင်းဆောင်များက ရခိုင်အရေး မြန်မာ ရှင်းလင်းရန်​ အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် တောင်းဆို
Geldof အား ဒဗ္ဗလင်မြို့တော်ရဲ့ လွတ်မြောက်ရေး ဆုချီးမြှင့်တာ ကို ရိုဟင်​ဂျာ လူမျိုးတုန်းသတ်​ဖြတ်​ မှုကို ကန့်ကွက်တဲ့ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ဆုကို ပြန်ပေးအပ်
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကတိစကား သမတထရမ့် ကြိုဆိုပြောကြား
မြန်​မာ့တပ်​​မ​တော်​ကို န်ိုင်ငံတကာ ​အ​ရေးယူပိတ်​ဆို့်​ရန်​ ဖိအား​ပေးမှုများလာ
မွတ်စလင် မျိုးတုံးအောင် ရှင်းနေတာနဲ့တူ နေကြောင်း ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
ရိုဟင်ဂျာ အရေး အကုန်လုံး ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဗြိတိန် ကတိပေး
မွတ်စလင်တွေ သုတ်သင် ရှင်းလင်းခံနေရတဲ့ အပေါ် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံးကို တင်မည်ဟု ပြော
က​နေဒါ ၀န်​ကြီးချုပ်​က ​ဒေါ်​​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ကို ဘာ​တွေ​ပြော့
ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီ မရှိကြောင်း လဝက ဝန်ကြီး ရဲချုပ် (ငြိမ်း) ဗိုလ်မှူးချုပ် (ငြိမ်း) ဦးခင်ရီ ပြောဆို။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကနေဒါနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာဂျက်စတင် ထရူးဒိုနှင့် တွေ့ဆုံ
​မြွေကိုက်​ခံရလျှင်​ ​မြွေရနိုင်​ တပါတည်း ​ဆေးရုံကို ယူသွားပါ။ (ဖြစ်​​အောင်​ဖတ်​ပါ)
ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်စုနှင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ ဆွေးနွေးမည်
​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာ ထရမ် ဒိုင်ကွမ်နှင့် တွေ့ဆုံ
မြန်​မာပြည်​ဖွား အဘ တ​ယောက်​ ပြောတဲ့ တစ်ချိန် တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ
HRW calls on world leaders to address Myanmar’s Rohingya crisis
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရမှုကို မလိုလားဘူး ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ကိုသက်ဆွေဝင်း နဲ့ အင်တာဗျုး
ကမ္ဘာ့ ​နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ၄ ဦး ရိုဟင်​ဂျာ အရေးကိစ္စ အတွက်​ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသွားမယ်
အ​မေရိကန်​ သမ္မတ Trump တရုတ်​နိုင်​ငံသို့ ​ရောက်​ရှိ
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (526) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (9) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (90) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (3) ဗဟုသုကဏ္ဍ (13) ဗုဒ္ဓဘာသာ (77) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,352) သတင်းများ (11,568) သမိုင်း (406) သုတစာပေကဏ္ဍ (60) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (349) အင်တာဗျူး(251) အစ္စလာမ်ဘာသာ (327) အထူးကဏ္ဍ (2,080) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (152) အထွေထွေ (37) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (6) ဥပဒေ (201) ဆောင်းပါးများ (4,495) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (8) English Dictionary (2) Other Dictionary (1) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (8) English – Rohingya (3) English Version (1,478) Articles (735) Documents (92) History (250) Arakan History (183) Burmese History (57) M-M History (45) Scripts (5) World History (42) Interview (19) Laws (12) News (901) Breaking News (280) Local News (289) Open Letter (11) Other News (10) World News (495) Religious (36) Islamic (35) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (207) Introduction (3) Link (237) Movie (51) Other Dictionary (6) Photos (750) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (339) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month November 2017 (75) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)